विगतका ती परिणाम जसले भलिबल सङ्घ भित्र जालझेलको क्रम सुरु भयो « KhelkudNews.com
Published On :5November, 2020 1:49 pm
नेपालमा रहेको थुप्रै खेल सङ्घ मध्यको नेपाल भलिबल सङ्घको साधारण सभा र निर्वाचन प्राय चर्चाको शिखरमा रहने गरेको छ । आसन्न निर्वाचनको चर्चा पनि सुरु भइसकेको छ । अहिलेको विषम परिस्थितिमा कहिले साधारण सभा र निर्वाचन हुने तथा को उम्मेदवार हुने भन्ने विषय धेरेका लागि चासो नहुन पनि सक्छ । तथापि गएका केही साधारण सभा र ती साधारणको प्रभाव कस्तो रहने भन्ने विषय चर्चामा रहन सक्छ
काठमाडौँमा ०६४ मा भएको साधारण सभामा गङ्गा बहादुर थापाले हंसराज वाग्लेलाई झीनो मतले पराजित गरेका थिए । सो निर्वाचनमा सत्ताको पुरै प्रयोग गङ्गा थापाको निमित्त प्रयोग भएको धेरैलाई जग जाहेर छ । यत्ति मात्र होइन पूर्वाञ्चलमा राम्रो पकड राख्ने गजेन्द्र ताम्लीको समर्थन अन्तिम समयमा गङ्गा थापालाई भए पछि वातावरण थापाको पक्षमा मोडिएको थियो ।
अर्को अधिवेशन फेरी कालीमाटीमा नै भएको थियो । जहाँ वर्तमान महासचिव जितेन्द्र चन्दको भलिबल प्रशासनमा उपस्थिति मात्र भएन त्यसरी असहज परिस्थितिमा सङ्घमा प्रवेश गरेका उनको प्रभाव एकाएक बढ्दै गयो ।
कालीमाटीको सो अधिवेशनमा एउटा अनाहकमा सङ्घबाट बाहिरिएका थिए, बुद्धि कटुवाल । दान बहादुर तामाङ र ताम्ली बिच चुनावी टक्कर हुने अवस्थामा राज्य पक्षकै पहलमा दान बहादुर र बुद्धि कटुवाल बिच एक किसिमको सहमति कायम गराइयो । यो सहमति पछि दान बहादुरले अध्यक्षमा तथा बुद्धिले महासचिवमा सहज जित हात पार्ने अनुमान गरिएको थियो । तर, घटनाले अर्को मोड लियो । चन्दको विजयका आधार खोज्नेहरू भन्छन्, “ताम्लीलाई अन्तिम समयमा धोका भएको महसुस सहित पूर्वाञ्चलको एउटा ठुलो समूहले चन्दलाई साथ दियो भने सुदूर पश्चिमका मतदाताले क्षेत्रीय आधारमा मतदान गरेका थिए ।”
राजनीतिक रूपमा वामपन्थी कार्यकर्ता नै धेरै प्रतिनिधि हुने गरेको भलिबल सङ्घको साधारण सभामा यसको प्रभाव नपर्ने त कुरै भएन । यस पछिको अधिवेशन भएको थियो, काठमाडौँ बुद्ध नगरमा । यहाँसम्म भलिबलले लामो यात्रा तय गरेको थियो । एका तीर दान बहादुर कार्यकालमा महासचिवबाट सहयोग हुने भन्दा पनि बढी नयाँ गुट सृजना गर्ने र शक्ति केन्द्र स्थापना गर्ने काम भएको थियो भने उनलाई सहयोग गर्ने गङ्गा थापामा पनि फेरी अध्यक्ष हुने लोभ पलाएको थियो । श्रोत भन्छ, “थापा अध्यक्ष हुने त्यसो नभए दान बहादुरलाई कुनै हालतमा अध्यक्ष हुन नदिने सोचमा पुगेका थिए । ” यस अघि भएको नेपाल ओलम्पिक कमिटीको साधारण सभाबाट गङ्गा र दान बहादुरको बिचको विवाद बढेको थियो । सोही समयमा चन्द पनि अध्यक्षलाई सेरोमोनीयल झैँ बनाएर आफू सर्वे सर्वा हुने दाउमा पुगेका थिए । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् नेतृत्व आर्थिक हैसियत अनुसार व्यवहार गर्ने भएका शर्माको सम्पन्नता र सरलताको फाइदा उठाउने सोचमा पनि केही बिचौलिया पनि थिए । यसको परिणाम स्वरूप मनोरञ्जन शर्माको नाममा कमजोर अध्यक्षको रूपमा नयाँ चरणको सुरुवात भयो । पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चलको विद्रोहको बाबजुद एउटा जत्थाले भलिबललाई आफ्नो पकडमा राखेकै थियो ।
यस चार वर्षको बिचमा नेपाल भलिबलले केही राम्रा परिणाम पनि प्राप्त गरेको हो जुन परिणाम विगतमा बसालिएको जगमा केन्द्रित थियो । तर, यसका बाबजुद केही खराब पाटा पनि देखिए । यस बिचमा क्षेत्रीयताको प्रसङ्ग देखिए । एक जना विदेशी नागरिकले कोर्टमै नेपाली टोलीको पदकको समेत मर्यादा नराखेको घटना देखियो । प्रशिक्षकको हकमा लामो समय देखिको इगो साध्ने घटना भएको एका थरी बत्ताउँछन् भने निर्णायकलाई विभाजनको प्रयास भएका थुप्रै घटना भए । खेलाडीमा थुप्रै असन्तुष्टि दिलाउने काम यस बिचमा भए ।
खेलकुद सङ्घमा क्षेत्रीयताका कुरा, अध्यक्षलाई कमजोर बनाएर आफ अनुकूल चलाउने नियतको विकास , खेलकर्मीको भावनामा विभाजन लगायत कुराको जन्म कालीमाटीको सोही अधिवेशनमा भएको सहमति विपरीत बुद्धि कटुवालको हारसँग त जोडिएको छैन । एक नं प्रदेश मात्र होइन सिङ्गो देशले यसलाई सुधार गर्ने मौका पाउने की नपाउने ? त्यत्ति मात्र होइन भलिबलको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घमा नेपालको प्रतिनिधित्व कसले कसरी गरेको थियो ? यसको खोजी गर्ने कि नगर्ने ? अध्यक्षले नेपालको प्रतिनिधित्व नगर्नुको भित्री कारण खोज्ने की नखोज्ने ? अनि पूर्वाञ्चलको विद्रोहको बाबजुद केही निकट व्यक्तिलाई सङ्घमा प्रवेश गराएर पूर्वी नेपालको विवेक र चेतना स्तरको खिल्ली उठाउने काम अहिलेको सङ्घमा पकड जमाउनेहरूले गरेका त होइनन् ?